Iresiphi yentsapho: IiBurgers ezisempilweni ngeSidlo sangokuhlwa | Oomama Namhlanje
Iresiphi yoSapho: IiBurgers ezisempilweni ngeSidlo sangokuhlwa
UAlicia tomero | 27/05/2021 10:00 | Unonophelo, Ukutya, Iiresiphi ezilula
Namhlanje kuphawula uSuku lweHlabathi lweeBurgers isidlo esithandwa ngabantwana nangabantu abadala kwaye namhlanje sinokufumana phantse kuzo zonke iimenyu zokutyela. Kodwa kutheni uye waduma kangaka?
Inyani yile yokuba ihambhega sisitya esivuma ukwahluka okukhulu, Kukho eyodidi eyenziwe ngenyama egayiweyo, kodwa sele kukho abalandeli abakhulu bezinto zemifuno esele bezenzile ngokupheleleyo burger yemifuno kunye nencasa ebalaseleyo.
1 Iibhega eziphilileyo kwisidlo sangokuhlwa
1.1 I-tuna okanye i-salmon burgers
1.2 Iinkukhu Burgers
1.3 Iquinoa Burgers
Iibhega eziphilileyo kwisidlo sangokuhlwa
Ukuba uthanda ukulungiselela isidlo sangokuhlwa esimnandi, esimnandi kwaye esilula, sicebisa ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza i-burger esempilweni, ezilungele ukwenza isidlo sangokuhlwa ngaphandle kokongeza iikhalori ezinkulu kwiyure yokugqibela yosuku.
Iiresiphi ezinempilo nezinesondlo zehamburger zabantwana bakho
Zonke iihamburger esiphakamisa ukuba zinemodeli yokubonisa efanayo. Zineefayile zakho ze- isonka esingqukuva esimile kwebhanisi okanye isonka kwaye unokuncedisa ngethisi yakho, itumato kunye netshizi. Zininzi ezinye izinto ezinokongezwa kwihambhega, ezinje nge itswele, ukhukhamba okanye iqanda elosiweyo, Ngaphandle kweesosi ezinje nge ketchup okanye lwemostade. Umxholo ophambili, obizwa ngokuba yihambhega, iya kuba yile nto inezithako ezahlukeneyo ezisempilweni nezisempilweni esizibonisa apha ngezantsi.
I-tuna okanye i-salmon burgers
I-220 g yetyhuna entsha okanye isalmon entsha
Iqhekeza lejinja egayiweyo (ukhetho)
Itispuni separsley enqunqiweyo
Iqhekeza elincinci legalikhi, eligayiweyo
Ukutshiza kweoyile yeoli
Inyama kufuneka siyisike kakuhle okanye ngoncedo lwemela senza iziqwenga ezincinci kakhulu, sigxininisa ekususeni ameva kakuhle. Sifaka kwisitya kwaye uthele iqanda, ijinja, ityuwa, igalikhi egayiweyo kunye netyuwa. Sivuselela kakuhle kwaye ekugqibeleni songeze Imvuthuluka yesonka ukuze i-hamburger ehambelana ngakumbi yenziwe.
Kwipani yokutshiza songeza i-oli yomnquma sabeka ihambhega. Siwuyeka ube mdaka kakuhle kumacala omabini kwaye wehlise ubushushu ukuba kunokwenzeka ukuze upheke kakuhle ngaphakathi. Sikhonza ukuthanda kwethu.
500 g yenyama yenkukhu
1 yomnqathe omkhulu
1 itswele eliphakathi
60 g iimvuthuluka zesonka
Icephe leparsley ecoliweyo
Sizoceba inyama yenkukhu kumatshini wokulungisa. Sifaka inyama ecoliweyo kwisitya kwaye yongeza iminqathe kunye netswele enemigca. Siphosa ifayile ye- iqanda, ityuwa, iparsley kunye negalikhi egayiweyo ubuthathaka kakhulu. Okokugqibela, sidibanisa Imvuthuluka yesonka kwaye udibanise kakuhle de ibe yintlama edibeneyo kodwa ethambileyo. Kwipani yokutshiza songeza i-splash yeoyile yomnquma kwaye siyifaka emlilweni. Senza iihamburger ngezandla zethu kwaye sinokuzibathambisa ngeesonka phambi kokuba ucoce. Sibenza ngaphezulu kobushushu obuphakathi kude kube nsundu ngegolide.
1 indebe yequinoa eluhlaza
Iikomityi ezine zomhluzi wenkukhu
I-50 g yetshizi egreyithiweyo
I-1/2 i-anyanisi ebomvu
1 ithisipuni egalelwe igalikhi
Sibeka pheka iquinoa kwi-casserole ngecephe leoli yeoli, amanzi kunye nomhluzi wenkukhu. Singawavumela amanzi ukuba angenise kwiquinoa emva kokupheka okanye ukukhupha amanzi. Okwangoku, sinqunqa itswele libe ngamaqhekeza amancinci kwaye sixubeke kwisitya: iquinoa, itswele, itshizi, amaqanda, ityuwa kunye nomgubo wegalikhi. Senza iihambhega kwaye sizithambise kumacala omabini epanini yokutshaya kunye neoyile.
Ezi hamburger zisempilweni kakhulu kwabo bantu bangakwaziyo ukutya inyama yenkomo kwaye abayithandi ukungahoyi indlela abatya ngayo esi sidlo. Zikulungele isidlo sangokuhlwa ngaphandle kweevithamini kunye neeproteni. Kwiindlela ezininzi zokupheka ezinokubangela umdla, unokufunda "Iiresiphi zokupheka zebhega","iindlela zokupheka zokutya"Okanye"iiresiphi ezilula zokuba abantwana bakho batye imifuno".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » Ukutya » Iresiphi yoSapho: IiBurgers ezisempilweni ngeSidlo sangokuhlwa
Unyana wam uthetha yedwa, ngaba yinto eqhelekileyo le?
Ngaba ubisi lweebhokhwe lulungele abantwana?
Fumana amanqaku akutshanje ngeentsana, oomama kunye nosapho.
Ukukhulelwa iveki ngeveki